မြစ်ကတော့ စီးလာမယ် ပင်လယ်တွေ ကြိုကြ
ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ပေးပို့ထားတဲ့ ဓမ္မသ၀ဏ်လွှာကောက်နှုတ်ချက်ပါ။ ရုရှားနိုင်ငံ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃရာဇာရဲ့ ၁၅ နှစ်မြောက်သံဃရာဇာနန်းတက်ပွဲအခမ်းအနားမှာ ရုရှားနိုင်ငံသံဃရာဇာ ဒမ္ဗ အယုရှေ ယက်ဗ်ထံ သမ္မတကြီး ဒီမီထရီမက်ဒီဗက်ကိုယ်တိုင် ကြေးနန်းနဲ့ ဓမ္မသ၀ဏ်ပါးခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတကြီးရဲ့ ဓမ္မသ၀ဏ်လွှာမှာ “ ဒီနှစ်များစွာအတွင်း အရှင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဖြစ်သော သာသနာပြုလုပ်ငန်းများကို ဖြည့်ဆည်းလျက် ဗုဒ္ဓဓမ္မ၏ ထာဝရတန်ဖိုးများကို အရှင်ဟောကြားခဲ့ပေသည်။ ရှေးဟောင်းဘာသာတရားကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသည့် လူထု၏ ဘာသာရေးနှင့် စာရိတ္တအတွေး အခေါ်များခိုင်မာသန်စွမ်းစေရန် အရှင်အားထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။” လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဘာသာရေးနဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာစင်တာတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ သံဃရာဇာရဲ့ အားထုတ်မှုကိုလည်း
“အရှင့်အနေဖြင့် ရုရှားနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဓမ္မဆိုင်ရာ ဘာသာရေးနှင့် ပညာရေးစင်တာများ ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်နိုင်ရန် ကျောင်းတော်သစ်များကို တည်ဆောက် နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရိုးရာ သံဃာ့အဖွဲ့သည် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံအတွင်းဝယ် အသိဉာဏ်ပညာနှင့် ဘာသာတရားများ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ဆက်ဆံမှု ဆိုင်ရာ ဒိုင်ယာလော့ခ်များ ထွန်းကားအောင် တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ညီညွတ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းနေခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်” လို့ ဆက်လက် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် သြဂုတ်လကလည်း သမ္မတကြီးမစ္စတာမက်ဒီဗက်ဟာ သံဃရာဇာကျောင်းတိုက်ကို သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါဟာ ရုရှားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ၁၆ နှစ်တာကာလအတွင်း ပထမဆုံး သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်က သမ္မတကြီးဘောရစ်ယဲ့ဆင် သွားရောက် ခဲ့ဖူးပေမယ့် သမ္မတမစ္စတာ ပူတင်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများကို တစ်ခေါက်မှ သွားရောက် ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
ရုရှားနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေ သန်းနဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံခေတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းတော်များစွာဟာ အပိတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က စပြီး အစိုးရရဲ့ အထောက်အပံ့ကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့တာပါ။ ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာလားမား ရဟန်းတော်တွေကို ရုရှားတပ်မတော်မှာ ဘာသာရေးအရာရှိ(Chaplain)တွေအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန် ပေးဖို့အထိ စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆိုဗက်ယက်လွန်ရုရှားမှာ တိဘက်လားမားရဟန်းတော်တွေက ရုရှားဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန်လည် ထွန်းကားရေး အတွက် အဓိကနေရာက ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရုရှားမှာ ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မွန်ဂိုနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခရီးစဉ်မှာ သမ္မတကြီးမက်ဒီဗက်က ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတော်တွေဆောက်ဖို့ နိုင်ငံတော်က ထောက်ပံပေးမယ့် အကြောင်းနဲ့ ပြည်ပက အကူအညီတွေကို မျှော်လင့်စရာမလိုကြောင်း၊ သူလာရောက် လည်ပတ်ခြင်းဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ ရုရှားရိုးရာကိုးကွယ်မှုဘာသာတရားများကြား ဆက်နွှယ်မှုရှိတာကို သက် သေပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 10:31 PM
ဓမ္မဂင်္ဂါ အရှင်ဝိစိတ္တသာရ (Dhamma Ganga)
နတ်စောင်းနဲ့ တီးခတ်တဲ့ အလွမ်းသီချင်း
နတ်စောင်းနဲ့ တီးခတ်တဲ့ အလွမ်းသီချင်း =========================== (၁) ဒကာ ကိုလေးဖြူကြီးလို “ဘယ်ဆီကို မင်းရောက်နေလဲ ဘာတွေ...
လွတ်မြောက်သူတို့နယ်မှာမှ ငါတို့က ပိတ်မိနေကြတယ်...။ (မှတ်စုစာအုပ်မှ)
ယနေ့ တက္ကသိုလ်စာသင်ခန်းထဲမှာ စာသင်နေစဉ် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာရေးနှစ်၏ ဒုတိယခြောက်လပတ်အတွက် ဧည့်ပါမောက္ခသက်တမ်းတိုးခန့်အပ်လွှာကို သူလက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။...
(၁) ယခုလည်း လာပြန်ချေပြီ။ ဒိသာပါမောက္ခကြီးတဲ့။ ပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာပြုကြီး တဲ့။ ယခင်နှစ်ကထက် သာလွန်လင်းလက် အရောင်ထွက်သော ဆိုင်းဘုတ်တော်ကြီ...
သူ့အခန်းရှေ့က သရက်ပင်ခြောက်လေးအောက်တွင် ခမ်းနားကြီးကျယ်သော မဏ္ဍပ်စင်ကြီးတစ်ခုရောက်ရှိနေသည်ကို အံ့သြမင်သက်သွားရ၏။ အိုး ဟိုး..ဂရိတ်ဗြိတိန်က ဒကာမ...
Dhammaganga Pali Institute
သံယောဇဉ် - သံယောဇဉ် ..................... (၁) “ဗရုက်သုက္ခကြီးနဲ့ … ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲ၊ ရဟန်းမ(ဘိက္ခုနီ)လုပ်ပြီး ဒီလောက်တောင် အချစ်ကြီးရသလား” ကြည်လင်အေးမြပြီး တည်ငြိမ်လ...
၀ိနည်းငါးကျမ်း ရွတ်စီဖြန်း - ၂၀၁၁ ခုနှစ်က အဘိဓမ္မာ (၇) ကျမ်းနှင့် သုတ် (၃) ကျမ်းပါဠိတော်တွေကို အောင်မြင်စွာ ရွတ်ဆုို ပူဇော်နုိုင်ခဲ့တယ်။ အချိန်ရရင် ၀ိနည်း (၅) ကျမ်းကုိုလဲ ရွတ်ဖတ်ပူဇေ...
မိန်းမ မာယာ - ရှေးသရောအခါ တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးမှာ တပည့်တစ်ယောက်ရှိလေသည်။ ထိုတပည့်၏မိန်းမသည် အခြားယောက်ကျားနှင့် ဖောက်ပြားလေ့ရှိ၏။ ထိုဖောက်ပြားသောနေ့၌ မိမိ၏ခင်ပွန်းကို ခါတိုင်း...
ဝါဆိုခြင်းဟူသည် - ရဟန်းတော်များသည် မိုးလေးလရှိသည့်အနက် ရှေ့ပိုင်းသုံးလတွင်မိမိအဆင်သင့်ရာ ကျောင်းတိုက်၌ စွဲမြဲစွာနေထိုင်ကြရသည်။ ယင်းကို ဝါကပ်သည် ဝါဆိုသည်ဟုပြောကြ၏။ စင်စစ်မှာ ...
အရှင်ဝိစိတ္တ (မနာပ ဒါယီ)
နဲနဲလေးတော့ လွဲနေတယ် (၃၀) - *ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဝိညာဉ်ပြဿနာ* ဒကာတစ်ယောက်က မေးလျှောက်လာပါတယ်။ “အရှင်ဘုရား လူတစ်ယောက် သေပြီးရင်နောက်ဘ၀တစ်ခုကို ချက်ချင်းကူးပြောင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၀ိညာဉ်ဆိုတာ...
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ (၃၆) မှတ်မှတ်ရရ နေ့တနေ့ - “ အရှင်ဘုရား နောက်တခေါက်လာလည်လျှင် မတ်လလောက်မှာအရောက်လာပါ။ အဲဒီလဟာ တနုိုင်ငံလုံးရဲ့နေရာတုိုင်းမှာပန်းတွေနဲ့ဝေပြီးလှပနေပါတယ်။ အဲဒီလမှာတော့နယ်သာလန်ဟာ ကမ္ဘ...
ဘာကြောင့်လို့ပြောမလဲ? - လူရွင်တော်တွေရဲ့ဟာသပြက်လုံးတွေကို ကျုပ်ကြည့်ဖူး ကြားဖူးတယ်..."ပခုံးနှစ်ဘက်ကြားခေါင်းပေါက်နေပေမဲ့ ဦးနှောက်နှင့်ဆုံးဖြတ်တတ်ရမယ်ကွတဲ့..နောက်တယောက်ကတော့ ဦးနေ...
ပိတောက်ရေ..................(၂) - မနေ့က ညဝက်စောင်းစောင်းမှာကောင်းကင်ဆိုတဲ့မြစ်ကချောင်းပေါက် မြစ်ရောက်မဟုတ်တဲ့မစို့မပို့ တခါးတစ်ချပ်ကို ဖွင့်ပြီးသင်္ကြန်ကို ကြိုလိုက်တာပိတောက်က မရှိဘူး။ ပြီြး...
ကွက်တိမိုး - `ယောင်္ကျားဖြစ်ရက်(လျက်) ဘယ်တော့မှ မျက်ရည် မကျစေနဲ့´တဲ့ ပြတ်သားတဲ့ အမေ့စကား နှလုံးသားမှာ စူးဝင် အရူးအမူးပင် ကိုးကွယ်ခဲ့…၊ လောကဓံ ဘယ်လောက်ရိုင်းရိုင်း အနိုင်နဲ...
Myanmar Web Designer - website development and SEO services
English collection (8)
အခြားတစ်ဘက်မှ အမြင် (1)
လောကီစောင်းငဲ့ခြင်းနှင့် ပိုင်စိုးဝေကဗျာ (5)
ဓမ္မဂင်္ဂါ. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.